Hrithik Roshan | स्पाइनल कर्ड इन्जुरी
स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’bout फिल्म
सम्वभत पहिलो पटक स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’bout फिल्म बन्न लागेको छ । सञ्जय लिला भन्सालीले ब्लाकजस्तै मन छुने सिनेमा गुजारिस बनाउने भएका छन । यो फिल्ममा हृतिक रोशनले ऐश्वर्य रायसँग व्हीलचेयरमा बस्ने प्याराप्लेजिक (पक्षघातयुक्त)व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने छन ।
उनले स्पाइन कर्ड इन्जुरी अर्थात मेरुदण्डको चोटका कारण अनुभूति र हिडडुल गर्ने क्षमता गुमाएका एक विरामीको भूमिका गर्नेछन । स्पाइनल कर्ड इन्जुरीपछि बिमारीहरु यात व्हीलचेयरको भर पर्छन ।
गुजारिसमा हृतिकले एक रेडियो शो होस्ट अर्थात आरजेको भूमिका निर्वाह गर्नेछन । प्याराप्लेजिक भए पनि एक आकर्षक र प्रतिभावान युवाको भूमिकामा उनी देखा पर्नेछन । ऐश्वर्य रायले हृतिकको नर्सको भूमिका निर्वाह गर्ने छिन ।उनी एक विवाहित महिला भए पनि हृतिकप्रति आर्कषित हुन्छिन ।
यो फिल्ममा इच्छा मृत्यु वा दयापूर्वक हत्याको पनि विषय उठान गरिएको छ । उनले यो फिल्ममा वास्तविक रुपमै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता प्याराप्लेजिकको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरुसँग पनि सम्पर्क गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
निर्माण स्रोतका अनुसार हृतिकले सही ढङ्गबाट व्हीलचेयर चलाउने प्रयासमात्र गरेका छैनन कसरी प्याराप्लेजिकहरुले बोल्छन हेर्छन र प्रतिक्रिया जनाउछन भन्ने पक्षमा पनि ध्यान दिएका छन । उनले प्याराप्लेजिकसम्बन्धी पुस्तकहरुको पनि अध्ययन गरिरहेका छन ।
घरमा पनि उनी व्हीलचेयर चलाउने अभ्यास गरिरहन्छन ।
हृतिकको घरमा यतिखेर यातायातको नयाँ साधन बनेको छ व्हीलचेयर । बाबु व्हीलचेयरमा हिडेको देखेर उनका छोराहरुले खुबै मनोरञ्जन लिने गरेका छन ।
निर्देशक भन्सालीले पनि यो फिल्मलाई सजीव र यथार्थ परक बनाउन विशेष पहल गरेका छन । उनी आफैले हृतिकलाई व्हीलचेयर प्रयोग र प्याराप्लेजिकहरुका ’boutमा सन्दर्भ सामग्री जुटाइ दिने गरेका छन ।
यसअघि गुरुमा विद्या बालनले व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने युवतीको सजीव भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन ।
हृतिकले यो फरक ढंगको भूमिकालाई चुनौतीपूर्ण मानेका छन । उनले आफ्ना बुबा राकेह रोशनको कोइ मिल गयामा मानसिक रुपमा नबढेको एक युवाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
ब्ल्याकमा रानी मुखर्जीले एक अन्धीको हृदय छुने भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन भने अमिताभ बच्चनले बूढेशकालमा विर्सने रोग (अल्जाइमर्स) भएको व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
जुलाई 15, 2009
वर्गहरु: Uncategorized . ट्यागहरु:Guzaarish, Hindi Movie, Hrithik Roshan, Sanjay Leela Bhansali, Spinal Cord Injury . लेखक: admin . Comments: टिप्पणी छोड्नुहोस्